Oromoon lubbuus lukkuus kan dhabuuf B I I L I S U M M A A qofaaf!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoon lubbuus lukkuus kan dhabuuf B I I L I S U M M A A qofaaf!!
#OLM-Malkaamuu Guutamaa jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Yuubdooti. Waraanni mootummaa reebicha irratti raawwateen haala suurarraa mullatu kanaan miidhamee jira.
Oromoon lubbuus lukkuus kan dhabuuf
B I I L I S U M M A A qofaaf!!
This is Malkaamuu Guutamaa from West Oromia.Yubdo. He is brutally tortured by Abiy Ahmed’s military forces. Secruty force ruthlessly targeting and torturing Oromo people in Oromia.
We believe top officials are aware of what is happening right now.
Stop Torturing and Killing Oromo!!!
Godina Aanaa Mooyyalee naannoo magaalaa Tuqaatti humna addaa Oromiyaafi hidhataa gandaa jidduutti waldhabbiin cimaan uumame.
Sababni isaas nama Adaan Waariyoo jedhamu Kan kaleessa humni addaa kun reebicha cimaa reebuun miidhaa hamaa irraan geessisee irratti Booranni Mooyyalee mufatee ka’eera.
Akkasumas ganama hardhaa humni poolisii addaa kun maatii qabsa’oota kanneen ijoolleen isaanii miseensota WBO ta’aniin yoo WBOn nu ijjeeftee akka itti gaafatamtan jechuun yeroo mallatteessisuu jalqaban; maanguddoonni Booranaa morman. Haalaa kanaan waldhabbiin uumame. Yeroo ammaa humni addaa kophaatti bayeera. Poolisiin Oromiyaa duraanis gama ummataa ba’uun addaa ba’aniiru.
Nama Kun kaleessa gabaasne turre, Adaan Waariyoo dha.
Adan Waariyoo akka hamma qulqulleeffanneetti nama umrii 18ti. Jiraata aanaa Mooyyalee ganda Bokkoolaati. Ganda Bokkoolaatti yabbiin warra baddee galgala naannoo saatii tokkoo osoo yabbii barbaadaaf deemuu humn Addaa Poolisii Oromiyaa reebicha hamaa irratti raawwatee akkana godhe. Adaan fincaa’uu dadhabee; kaleessa tuubboon irraa waraaban. Hardhas akkana jira. Yeroo ammaa hospitaala Mooyyaleetti yaalamaa jira.
Dargaggoo Galgaloo Okkotuu hojjataa wajiira sodaa balaa godina Booranaati. Dheengadda fira isaa dubbisuuf magaalaa Mooyyalee deemnaan bulchaatu si dubbisuu barbaadaa jechuun waamanii ; inni dhufnaan mana hidhaa Mooyyaleetti darbatan.
Yeroo ammaa Galgaloofi dargaggoonni baayyeen gaaffii tokko malee guyyaa 3ffaaf mana hiraarsaatti hiraarfamaa jiru!
Godina Booranatti summiin WBO balleessuf bifame Loon horsiisee bultootaa hedduu ajjeese.